Muraayada muraayadda-galaas-galaas-galaas nabadgelyada Glass-Jumbo - Yongyu
Waxaan nahay adeeg bixiyaha la oggolaaday ee SGCC & CE, alaabadayadu waxay la kulmaan heerarka ugu weyn ee dhismaha alaabooyinka galaaska.
Himiladeenna: Ka wada shaqee si aan u gaarno guul, oo u abuurno aragti hufan!
Yongyu Glass, doorashadaada ugu fiican ee aad ka dhisayso badeecada muraayadaha ka soo baxda Shiinaha.
Shirkadda waxaa aasaasay Gavin Pan, kaasoo ka shaqeynayay warshadaha galaaska ilaa 2006 wuxuuna leeyahay khibrad dhoofinta wax ka badan 10 sano. Yongyu Glass wuxuu xubin ka yahay Bixiyaha Ururka Ice Rink Association. Himiladeenna waa inaan la wadaagno faa'iidooyinka isbarbardhigaya ee warshadaha muraayadaha naqshadda Shiinaha ee macaamiisha, si loo siiyo macaamiisha xalka qiimaha-ku-habboon, iyo in la gaaro wada-shaqeyn guul leh macaamiisha.
Waxaan ku hawlanaynay warshadaha dhalada dhismaha waxaanan u adeegnay macaamiisheenna Shiinaha iyo dibadaba. Waxaan u helnaa xalka shaqsiyeed dalabka macaamiisha, waxaan ka caawineynaa macaamiisha inay badbaadiyaan qiimaha waqtiga iyo lacagta.
Waxaannu ka go'an nahay in aannu alaabada ugu sarreeya u gaadhno macaamiisheenna Shiinaha, woqooyiga Ameerika, iyo Yurub si ay u ogaadaan heerka ugu sarreeya ee waxa aannu qabanno.
Waxaan ku adkeysaneynaa tayada waxsoosaarka waxaanan si adag u xakameyneynaa geedi socodka soo saarista, oo aan ka go'an soo saarista dhammaan noocyada.
Hogaamiyaha firfircoon ee warshadaha wax soo saarka galaas, waxaan dejinaynaa bartilmaameedka geedi socodka wax soo saarka qeybaha ganacsiga iyo kuwa aan ganacsiga aheyn. Taasi waa habka aan ku siinno qiimaha ugu badan ee shey kasta, haddii aad rabto iyo in kale.